आस्थाले रुँदै माफी मागिन : अभद्र व्यवहार मुद्दा चलाउने प्रहरीको तयारी ! - Maxon Khabar
Home / News / आस्थाले रुँदै माफी मागिन : अभद्र व्यवहार मुद्दा चलाउने प्रहरीको तयारी !
आस्थाले रुँदै माफी मागिन : अभद्र व्यवहार मुद्दा चलाउने प्रहरीको तयारी !
२०७६ माघ ३ - ख्याति प्राप्त गायिका आस्था राउत लाइभमा प्रहरी प्रसासनकाे अनुसासनकाे बिरूददमा बाेले पछी देशकाे माहाेल एकाएक गरम भएकाे छ । त्रिभुवन विमान स्थलमा प्रहरी जवान रमिता श्रेष्ठ र उनी बीच भएको विवादको भिडियाे सार्वजनिक भएपछि गायिका आस्था राउतले माफी मागेकी छिन। सामाजिक सञ्जालमा उनको भिडिओ सार्वजनिक भएपछि केही उनको पक्षमा उभिएका छन् भने केहीले भने गायक हुदैमा सम्बेदनशिल क्षेत्रमा मनपरी नचल्ने भन्दै उनकै अालाेचना गरेका छन । आस्था राउतले सार्वजनिक गरेको भिडिओले बिहीबार एकाएक चर्चा पाएको थियो। सोही घटनालाई लिएर महानगरीय प्रहरी कार्यालयलाई छानबिन समेत गर्न निर्देशन दिएको थियो। राउतले आफूमाथि चेकजाचमा रहेका महिला प्रहरीले असभ्य भाषा प्रयोग गरी ‘दुर्व्यवहार’ गरेको भन्दै बुधबार लाइभमा आएकी थिइन्।
सो क्रममा उनले प्रहरीलाई ‘अपशब्द’ प्रयोग गरेकी थिइन्। शुक्रबार त्रिभुवन विमानस्थलमा राउत र प्रहरी जवानबीच भएको भिडिओ एकाएक सार्वजनिक भएपछी संजाल तात्याे त्यसपछि गायिका राउत फेरी फेसबुकबाट लाइभ आएर आफूले प्रहरी जवानलाई अपशब्द बोलेको भन्दै त्यस प्रति माफी मागेका छन्। उनले भनेका छन 'लाइभ आउनेबेलामा म अलिकति संम्यमित हुनसक्थें, कम्प्लेन थियो त्यसलाई डिसेन्ट वेमा भन्न सक्थें' । तर आफूप्रति दुर्व्यवहार भएको भने उनले दाबी गरेका छन । 'मप्रति दुर्व्यवहार भएकै हो आज नि भन्छु, भोलि नि भन्छु,' उनले भनिन्, 'मैले घटनालाई के भएको हो सरल भाषामा भन्न सक्थे; डन्ठे, सन्ठे भन्न हुँदैन थियो, सबै प्रहरीलाई सरी भन्न चाहन्छु तपाईंहरूको मनोबल गिरेको भए।' 'दुई चार वटा शब्द मैले नभनेको भए हुन्थ्यो, नत्र भने मैले भनेका अरु कुरा गलत छैनन्,'उनले थप भनेकी छन्।
साे सम्बन्धमा प्रहरी कर्मचारीलाई बुधबार दुर्व्यवहार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा राउतमाथि कारबाही हुने भएको हो। बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरी जवान रमिता श्रेष्ठमाथि दुर्व्यवहार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरीले राउत माथि कारबाही गर्ने भएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले राउत र प्रहरी जवान श्रेष्ठबीच भएको कुराकानीको भिडिओ तथा त्यसबेला रेकर्ड भएको सिसिटिभी फुटेजसमेतको प्रतिवेदन संकलन गरेर महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी (मेट्रो)मा पठाएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा जवान श्रेष्ठले आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको उल्लेख गरेकी छिन्।
सो प्रतिवेदनको आधारमा राउतमाथि अभद्र व्यवहार गरेको कसूरमा कारबाही गरिने महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले जनाएको छ। ‘प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ, सो प्रतिवेदन थप अध्ययनसमेत गरेर गायिका राउतलाई कानुनी दायरमा ल्याउँछौं,’ प्रहरी नायब महा-निरीक्षक विश्वराज पोखरेलले भने। प्रहरीका अनुसार राउतले भने अहिलेस म्म कानुनी रूपमा प्रहरीमा कुनै उजुरी गरेकी छैनन्। ‘राउतले गल्ती गरेको रहेछ भने कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ, पोखरेलले भने। प्रहरी जवान श्रेष्ठले ड्युटीका बखत गल्ती गरेको भए उनी माथि पनि आचरण-व्यवहारमा कारबाही हुने पोखरेलले बताए। यस्तै, राउतले सो घटनालाई लिएर बाहिर ल्याएको भिडिओ पनि प्रहरीले संकलन गरेको छ।
सो भिडिओका आधारमा राउत लाई साइबर अपराध-सम्मको कसूरमा अनुसन्धान गरिने महानगरीय कार्यालयले जनायो। ‘सो भिडिओमा प्रहरीमाथि जुन किसिमको अपशब्द र संगठनकै मान मर्यादामा चोट पुर्‍याउने किसिमको शब्द उल्लेख छ, त्यसले साइबर अपराध सम्मको कारबाही आकर्षित गर्छ,’ रानीपोखरीकै एक अधिकृतले भने। त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका एसएसपी रामकृपाल साहका अनुसार माघ १ गते राउत भद्रपुर जाने क्रम यो घटना भएको थियो। कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त सुरक्षाकर्मीले चेकजाँच गर्ने क्रममा राउतले दुर्व्यवहार गरेको देखिएको साहले बताएका छन।
के भएकाे थियाे एयरपाेर्टमा हेर्नुस भिडियाे :